Mụta igwu Nice | Martech Zone
Monday, October 10, 2011 Monday, October 10, 2011 Douglas Karr
Ọ bụrụ n’ịleghachi anya n’akụkọ ihe mere eme nke blọọgụ a, ị ga - ahụ na anyị nwere ọ excitedụ n’ịchọta teknụzụ ọhụụ na ịkụziri ndị na - agụ akwụkwọ anyị banyere ha. Ọ gwụla ma ụlọ ọrụ ọ na-eme ihe rụrụ arụ ma ọ bụ naanị nzuzu, anyị na-enwekarị echiche dị mma na anyị. Achọghị m ka blọọgụ a buru ibu nke na anyị nwere ike lie ụfọdụ ụlọ ọrụ ma na-akwalite ndị ọzọ… ọ na-emechu m ihu mgbe ụfọdụ ndị ọrụ ibe m ndị ọzọ na-ewu ewu na-ewere ihe ndị ahụ n'ihu ọha.
Dị ka na-adịbeghị anya dị ka ụnyaahụ, M natara mkpesa si trolls. Kedu ihe bụ troll?
N'asụsụ Internetntanetị, otu ihe bụ onye na-ezigara ozi mkpasu iwe, nke ọzọ, ma ọ bụ okwu na-enweghị isi na mpaghara ịntanetị, dị ka mkparịta ụka n'ịntanetị, ebe nkata, ma ọ bụ blọọgụ, na ebumnuche bụ isi nke na-akpali ndị na-agụ ya ịbụ nzaghachi mmetụta uche ma ọ bụ nke ma ọ bụghị na-akpaghasị mkparịta ụka nkịtị na isiokwu.
M ga-agbakwunye di na nwunye ndị ọzọ e ji mara… trolls bụ Elezie ụjọ na zoo n'okpuru anonymity. Na na blog a, trolls na-anwa imebi ụlọ ọrụ ndị anyị na-ede banyere ha.
Aga m anwa ole na ole ịzaghachi otu ihe, ma mgbe m hụrụ ha ka ha na-akpọ aha ma na-eleghara eziokwu anya, m na-akwụsị ịgwa ha okwu. M hapụrụ azụmahịa ahụ ka a mara ha ikpe. Ọ bụrụ na azụmaahịa ahụ gbalịrị idozi ọnọdụ ahụ na enweghị ike (nke a na-ahụkarị n'ihi amaghị aha), m ga-ewepu okwu ahụ.
N'ihi gịnị? Nke a ọ bụghị inye ụlọ ọrụ ikike ngafe? Ọ bụ emeghị ihe n'eziokwu?
Echeghị m otú ahụ. Mgbe m gbara ụlọ ọrụ ajụjụ ọnụ, nweta nseta ihuenyo, wee kọwaa ngwa ha, Anaghị m eme mkpebi maka ịzụta gị. M na-ede ederede ntanetị dị nkenke dabere na azụmaahịa ụlọ ọrụ, nzaghachi ma ọ bụ nkọwa ngwaahịa yana ana m ekerịta ihe ngwa ọrụ ahụ bụ yana otu m kwenyere na ọ nwere ike isi nyere aka n'ahịa. Thoselọ ọrụ ndị ahụ rụsiri ọrụ ike ịmalite ngwaahịa ma tinye nnukwu ihe egwu site na itinye onwe ha ebe ahụ maka nkatọ.
Fọdụ ndị kpọrọ ụlọ ọrụ asị (anyị na-ahụ ọtụtụ ihe n'oge a). Enwere m ihe uto uto maka ha n'ihi na arụrụ m ọrụ maka ọtụtụ ụmụaka malitere. Ahụla m àjà - na ego, oge na ezinụlọ - na ndị mmadụ na-eme iji nwaa iwere ihe site n'echiche, na nrọ na eziokwu. Nke ahụ na-ewe ọtụtụ ọrụ… na ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị enwe ihe ịga nke ọma. Achọghị m ka ụlọ ọrụ daa… na-ekiri founders na ndị ọrụ ida ihe niile. Ọ dịghị onye kwesịrị.
Otu okwu na-adịghị mma nwere ike itinye ụlọ ọrụ na nchebe. Ahụrụ m na ọ na-eme otu n'ime ụlọ ọrụ m rụrụ ọrụ maka… onye katọrọ azụmahịa na ntanetị ma ha enwetaghị mgbe ọ bụla post ahụ malitere ịrịa ma merụọ ahụ na mkparịta ụka ọ bụla maka afọ na-esote. O siri ike… na enweghị isi. Ọ bụghị naanị ndị isi nwere ikike ime ya ọzọ, ma… otu ọdịnaya dị mfe nwere ike ịmalite ọkụ na-eme ka azụmahịa dị n'okpuru.
Yabụ, echere m na m nwere ọrụ dịịrị ma ndị na-agụ ya na ụlọ ọrụ site n'inye ndị mmadụ uru nke obi abụọ. Ọ bụrụ na onye na-ekwu okwu chọrọ ịpụta na ndò wee rụọ ọrụ na-akatọ ụlọ ọrụ - nke ahụ bụ nnukwu mkparịta ụka ịnwe. Ma mgbe otu ihe na-adaba na bọmbụ na-edeghị aha ha, anaghị m anabata ya. Aga m azaghachi otu ugboro ma ọ bụ abụọ wee kparịta ụka. Ọ bụrụ na ha gaa n’ihu, agaghị m enye ha ohere ọzọ.
Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na enwekwaghị m nkwanye ùgwù maka afọ ndị gara aga… mana agaghị m anwa ibibi ha. Anaghị m enye ha ọ bụla nlebara anya na blọọgụ a. Nke ahụ bụ ohere m nwere - ịkwalite nnukwu ụlọ ọrụ ma leghara ndị kwesịrị ịhapụ anya. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma aka m na otu n’ime post m, ana m anabata nkatọ ahụ! Ma ọ bụrụ na ị ga-eti mkpu ma kpọọ aha, agaghị m ege ya ntị.
Ana m atụ anya ka anyị na-aga n'ihu mkparịta ụka!
Etu esi etolite Twitter gi